Tarisa kana yako iPhone iri yemahara
Kana iwe uchida ziva kana yako iPhone yakavhurwa, pano isu tinokupa iwe sevhisi kuti uitarise ine yakazara vimbiso. Tsvaga kana iwe iPhone mahara kana kwete nenzira yakachengeteka inogoneka.
Kuziva mamiriro ehukama hweyedu iPhone kana iyo iPhone iyo yatinoda kuwana zvakakosha kuti tichinje kambani yenhare mune ramangwana nechinangwa chekuchengetedza pamabhiri edu, kana kungoitira kuita kwakasiyana siyana kwekusabatanidzwa zvachose kune kambani. Kana iyo iPhone inogamuchira makadhi kubva kune chero mhando yekambani, inozivikanwa se "yemahara" iPhone, ndiko kuti, tinogona kushandisa SIM makadhi kubva kune chero opareta pasina chero rudzi rwekudzivirira uye nenzira yakapusa inogoneka.
Ungaziva sei kana iPhone iri yemahara
Naizvozvo, kana tichizowana chechipiri-ruoko chishandiso che iPhone, zviri izvo kuti ramangwana mutengi anoziva kana iyo iPhone iri yemahara kana yakabatana nekambani yenhare, nekuti neimwe nzira, ivo havazokwanise kuishandisa neimwe opareta kadhi kune iro rakabatana neiyo iPhone. Naizvozvo, danho rakakosha usati watenga iPhone, ndeyekuti uve nechokwadi chekuti mahara uye tinogona kuishandisa nekambani yenhare yatinoda. Kuti uzive kana yako iPhone yakavhurwa, tinokupa iri nyore uye nekukurumidza sevhisi, iwe chete unofanirwa kuisa iyo data yakatsanangurwa muchimiro, iwe unozogamuchira email ine mushumo wedata rakakumbirwa mukati maminetsi angangoita gumi nemashanu (mune imwe chaiyo zviitiko zvinogona kunonoka kusvika kumaawa matanhatu).